Wasiirro hor leh oo ka tirsan kuwa Galmudug oo is casilaya | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiirro hor leh oo ka tirsan kuwa Galmudug oo is casilaya
Is-casilaadda xubno ka tisan, Golaha Wasiirrada Galmudug, ayaa noqon karta tusbax go’ay, kadib markii Madaxweyne Qoorqoor, uu dhagaha ka fureystay talooyin ay u jeediyeen, oo ku aaddan habka loo wajahayo Ahlu-sunna.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya xarunta dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb, kadib is-casilaaddii Wasiirka Amniga Axmed Macalin Fiqi, ayaa sheegaya in saacadaha soo socda ay xilalka banneyn doonaan ku dhawaad 10 Wasiir, kuwaas oo ku aragti ah Wasiirka Amniga.
Xoguhu waxa ay tilmaamayaan, in Madaxweynaha Galmudug, uu dhagaha ka fureystay, talooyin ay Wasiirradu u soo jeediyeen, kuwaas oo ku aaddan habka lagu wajahayo xiisadda koox diimeedka Ahlu-sunna, oo gacan ku heynta magaalada Guriceel, jimcihii ka fara-maroojisay Galmudug.
Wararku waxa ay sheegayaan in Golaha Wasiirrada, intooda badan isku raacsan yihiin, in miiska Wada-hadalka la isugu yimaado, tabashooyinkana lagu xalliyo wada-xaajood iyo is if-garad, lagana baaqsado dagaal degaanka ka dhaca xilligaan oo abaar baahsan ay ka taagan tahay gobolka Galgaduud.
Ilo xog-ogaal ah, waxa ay Keydmedia Online, u sheegeen in Madaxweyne Qoorqoor, uu doonayo inuu awood ciidan ku soo celiyo degaannada ka baxay gacanta maamulka, isaga oo aan wax talo ah weydiin Golihiisa Wasiirrada.
Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macallin Fiqi,oo dhawan is casilay, ayaa Qoorqoor, ku eedeeyay inuu doortay jidka dagaalka, isla-markaana ciidamo uu Muqdisho ka soo daabulay uu doonayo inuu ku dagaal galiyo Gurceel.
Billowgii sanadkii hore, intii lagu guda jiray u diiyaar-garwgii, doorashada Madaxweynaha Galmudug, waxaa habkii ay Madaxtooyada Soomaaliya, wax u wadday, oo RW Xasan Cali Kheyre, wakiilka uga ahaa, si weyn uga soo hor jeeday labo koox oo kala ahaa, Mucaaradka Dowladda Federaalka iyo koox diimeedka ASWJ, mar kale, arrintii oo kale ayaa muuqata in ay ka taagan tahay Dhuusamareeb.
Dad badan ayay layaab ku noqotay in Golaha Wasiirada Galmudug ay qeyb ka noqdaan, xubno Mucaarad ah, kuwaas oo ka mid ahaa Baarlamankii 10-aad ee JFS, hayeeshee, wax badan oo huursana sanad iyo sideeddii biloo ee la soo dhaafay ayaa ugu danbeyn sidii folkaanadii u qarxi karta, taas oo dhabar-jab ku noqon karta Qoor-qoor.